Articles Archives ⋆ Page2of 86 ⋆ Popular
တစ်ခုသော တစ်နေ့နေ့မှာတော့ စနေ၀ိုင်းမှာ မျက်နှာသစ်ကုလားက လေးတစ်ယောက်ပါလာတယ်။ ပရ ဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာ တက်တက်ကြွ ကြွပါဝင်တတ်တဲ့ ပလာတာရိုက်ပြီး အသက်မွေးတဲ့ ကုလားကလေး ချို တူးပါပဲ. . .
ကျွန်တော်ဟာ မီးထွန်းသမားကိုကြည့် ပြီး ခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဒီကို ရောက်လာတာလဲလို့ မေးလိုက်တယ်။ မင်းကမ္ဘာက သိပ်မှောင်တာကိုး ငါ ရောက်လာရတာပေါ့လို့ မီးထွန်း သမားက ဖြေတယ်. . .
၀ါဆိုလပြည့်နေ့တွင် မင်းညီ မင်းသားအသွင်ပန်းတော်ခေါင်း ပေါင်း ၀တ်ဆင်ထားသော ပုဂ်္ဂိုလ် တစ်ဦးအား စေတီတော်ဘုရားခန်း တွင် တွေ့မြင်ခဲ့ခြင်း. . .
တစ်ဖက်သားကိုပျော်အောင် လုပ်ပေးခြင်းဟာ ကိုယ့်ရဲ့အပူတွေ ကိုလည်း လျော့ပါးစေတယ်လေ။ မင်းပူတာက နည်းနည်း ငါပူတာက ပိုများတယ်လို့ ပြောဆိုပြီး ဒေါသ တရားတွေပါလာခဲ့ရင် အပူပေါ် အပူဆင့် ထပ်ပူတတ်တာမို့. . .
ရထားကမှ ရပ်ရမယ့် ဘူတာတွေ ရပ်သေးတယ်။ ဘ၀ရ ထားကြီးကတော့ ဘယ်မှာရပ်မလဲဆို တာ မသိနိုင်တဲ့အခြေအနေပါ။ လမ်း ချော်အုံးမလားဆိုတာလည်း မသိနိုင် ပါ။ အခွင့်အရေးတွေ အချိန်အခါ တွေ ရောယှက်နေတဲ့ဘ၀မှာ ဖျပ်က နဲ ဖျပ်ကနဲ…
အမေဟာ မုန့်ဆိုင် က ဈေးကြီးတဲ့မုန့်တွေ ၀ယ်မကျွေး ဘဲ ကျွန်တော်တို့ကို ချပါတီလုပ်ကျွေး ခဲ့တာ။ ကုလားပဲကို နူးအိနေအောင် ပြုတ်ထားပြီး ချပါတီနဲ့ တွဲဖက်စား နိုင်အောင် မဆလာနဲ့ ချက်ပေးထား တယ်။ လူငယ်ဘ၀ရဲ့ အောက်မေ့…
မြန်မာနိုင်ငံမှ ပညာရေးအာဏာပိုင်တစ်ဦးက အင်္ဂ လန်မှ M.Phil. ဘွဲ့ရခဲ့သူနှင့် မတည့် သဖြင့် M.Phil. ဘွဲ့ကို နှိမ်သည့် အနေဖြင့် အဆင့်လျှော့ထားခြင်းဖြစ် သည်ဟုလည်း ဆိုကြသည်။ M.Phil. ဘွဲ့ ပေါ်ပေါက်လာသည့်အတွက် အသက်ကြီးပိုင်း နည်းပြသရုပ်ပြများ…
ဆရာလူထုစိန်ဝင်းသည် ညာ ဘက်လက်ဖြင့် စာမရေးနိုင်သော အခါ ဘယ်ဘက်လက်ဖြင့် စာရေး ကျင့်ကာ အောင်မြင်စွာစာရေးသား လာနိုင်သည်။ ကွန်ပြူတာစာရေးငှား ၍ ရေးနိုင်သော်လည်း ကွန်ပြူတာ မသုံးပါ။ ကိုယ့်လက်ကိုယ်အားကိုးခဲ့ ပါသည်. . .
ဟဲ့ ..မသာလေးတွေ နင်တို့ အဖေကို စမနေနဲ့ ကိုယ့်လမ်းကိုယ် ဖြောင့်ဖြောင့်သွားစမ်း''ဟု ငါးသည်မ ကြီးက အော်၏။ ငတိုလေးနှစ် ယောက် ငါးသည်ကို ဘုကြည့်ကြည့် ကာ။ ''ကျွန်တော်တို့ အဖေမဟုတ်ဘူး ဗျ။ အဲဒါ အဒေါ်ယောက်ျား.…